राजर्षि जनक कपमा को को भए उत्कृष्ट ? आर्मीका दीपलाई बागमति खेलाडी सम्मान | Hamro Khelkud
राजर्षि जनक कपमा को को भए उत्कृष्ट ? आर्मीका दीपलाई बागमति खेलाडी सम्मान
सर्लाही (हाम्रो खेलकुद)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका फुटबल खेलाडी दीप लामा बागमति खेलाडीबाट सम्मानित भएका छन् । राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा बुधबार दीपलाई उक्त सम्मान गरिएको हो । उनले मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतियोगिताको अधिकांश व्यक्तिगत पुरस्कार राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताका फाइनल पुग्ने दुई टोलीका सदस्यले जिते । त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० ले हराउँदै लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दीले राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो ।
दस खेलाडीमा सिमित मनाङले फाइनल जितेको हो । योसँगै मनाङ घरेलु फुटबलमा जारी सिजनमा नकआउट फुटबलको सर्वाधिक उपाधि जित्ने टोली बनेको छ । यो टोलीको चौथो उपाधि हो । आर्मी र सिएमजी क्लब संकटाले समान ३ उपाधि जितेका छन् ।
४९ औं मिनेटमा विमल रानाले गरेको गोल मनाङलाई बर्षको चौथो उपाधि दिलाउनका लागि पर्याप्त रह्यो । खेलको अन्त्यतिर दस खेलाडीमा सिमित भएपनि मनाङ अग्रता जोगाइ राख्न भने सफल भयो ।
विवेक बस्नेतले ७६ औं मिनेटमा दोहोरो पहेलो कार्डसँग रातो कार्डपाएपछि मैदान छोडेका थिए । फाइनलमा गोल गरेका विमल उत्कृष्ट स्ट्राइकर घोषित भए ।
समान ३ गोल गरेका उनै विमल र आर्मीका जर्ज प्रिन्स कार्की प्रतियोगिताको उच्च गोल कर्ता बने । मनाङका दीनेश थापामगर उत्कृष्ट गोलकिपर, अडमोबो सिसिको उत्कृष्ट रक्षक, आर्मीका पदम तामाङका उत्कृष्ट मिडफिल्डर र मनाङका छिरिङ लोप्साङ उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उत्कृष्ट सबैले समान १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
फाइनलको म्यान अफ दी म्याच आर्मीका दीपक गुरुङ भए । मनाङले उपाधिसहित ४ लाख रुपैयाँ र आर्मीले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । बागमति युवा क्लबले आयोजना गरेको राजर्षि जनक कपमा ७ ए डिभिजन क्लब र बी डिभजन टोली ब्वाइज युनियन क्लबको सहभागिता थियो ।
राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता २०७३
विजेता – लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी (४ लाख रुपैयाँ)
उपविजेता – त्रिभुवन आर्मी क्लब (२ लाख रुपैयाँ)
बागमति खेलाडी सम्मान – दीप लामा (आर्मी)
उत्कृष्ट गोलकिपर – दीनेश थापामगर (मनाङ)
उत्कृष्ट रक्षक– अगमोबो सिसिको (मनाङ)
उत्कृष्ट मिडफिल्ड – पदम तामाङ (आर्मी)
उत्कृष्ट स्ट्राइकर – विमल राना (मनाङ)
उच्च गोलकर्ता – विमल राना ((मनाङ)), जर्ज प्रिन्स कार्की (आर्मी), ३ गोल
उत्कृष्ट प्रशिक्षक – छिरिङ लोप्साङ गुरुङ (मनाङ)
बागमति सम्मान वापत मोटरसाइकल र अन्य उत्कृष्टलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ